Iibhanki zikhuthaza ukufudumala kwehlabathi | Martech Zone
Iibhanki zikhuthaza ukufudumala kwehlabathi
NgoLwesibini, Agasti 7, 2007 NgoLwesine, Agasti 9, 2007 Douglas Karr
QAPHELA 8 / 9 / 2007: Andiqinisekanga ukuba inento yokwenza neposti yam, kodwa iSky Financial ngoku ibuyisele i $ 1.75.
Umyalezo kwibhanki yam, ZeMali zeSky:
Nge-8/3/2007 ndahamba ndaya kwi-ATM yase-Smith Valley kunye ne-ATM ye-County Line ngaphandle kwe-US31 kwaye zombini ii-ATM bezingasebenzi. Ndingakuvuyela ukususwa kwe-08-03-2007 IMALI YOKUSETYENZISWA KWE-ATM YANGAPHANDLE $ 1.75 kwiakhawunti yam. Andinayo enye indlela ngaphandle kokundwendwela iATM yenye ibhanki.
Impendulo esuka kwi-Sky Bank:
Ngelishwa asizukukwazi ukubuyisela imali yerhafu yokusebenzisa iATM. Kukho iindawo ezintlanu ezahlukeneyo ngaphakathi kwe-5 yeemayile ngaphakathi kweGreenwood. Ukuqhubeka nengxoxo ngalo mbandela ungathetha nomphathi weZiko lezeMali laseGreenwood.
Ukudibana okuzayo kunye ne-Huntington Bank ungasebenzisa nayiphi na i-ATM yomatshini we-ATM ngaphandle kweentlawulo zeenkonzo konke konke. Kukho i-ATM eyi-1,400 phakathi kweSky neHuntington onokuyisebenzisa.
Enkosi ngokubhankisha nge-Sky Bank.
Kungenxa yoko le nto ndizithiyile iibhanki kwaye kutheni ingxoxo iphelile:
Ungandibuleli ngokubhankisha nge-Sky Bank. Ndizamile kabini ukuya ebhankini nge-Sky Bank kodwa ii-ATM zakho bezingezantsi.
Ngaba ulindele ukuba ndiqhubeke nokuqhuba ukusuka kwiATM ukuya kwiATM ndide ndifumane esebenzayo?
Ndifanele ukuba ndonwabile ukuba kuya kubakho ii-ATM ezingaphezulu kwe-1,400 ezingafumanekiyo?
Ukuba ukhe wabona ukuba zingaphi iifizi endizixabisileyo naba bafana, uya kukrwitshwa. Inyaniso yokuba abayi kuxolela i-1.75 eyi- $ elula ayinangqondo. Ndiyathemba ukuba lonke isebe leNkonzo yaBathengi liya kuncitshiswa ekudibaneni.
Nazi iindawo ezintlanu… ezifanelekileyo, huh?
Zizinto ezincinci eziphucula amava omsebenzisi!
I-Apple eMac kunye neMicrosoft XBox?
UElizabeth / iNcwadiTestOnline.com
Agasti 7, 2007 kwi-9: 08 AM
Wowu! Ucaphuke nyani.
Kuvakala ngathi uhlawule kakhulu
yemirhumo. Ukusuka kwinto endiyifundileyo
ungamandla amakhulu kwibhlog
umhlaba. Basenokuba bakubiza
Agasti 7, 2007 kwi-10: 24 AM
Ewe, bandenze ukuba ndihambe! Khange ndikhathazeke ndide ndifunde impendulo! Ndifuna ukuqiniseka ukuba bafumana i $ 1.75 yabo ngaphandle koku. 🙂
Agasti 7, 2007 ngo-2: 10 PM
Kuya kufuneka uhambe nebhanki ekwi-Intanethi. Ndiye ndasebenza ebhankini Everbank kule minyaka ili-8 idlulileyo. Bandibuyisela imali efikelela kwi $ 6 / mo kwimirhumo ye-ATM. Bade babonelele ngeposi kwimvulophu yokuthumela iirisithi kuyo.
I-Everbank ikwabonelela ngetoni yezinye izinto ezintle uninzi lweebhanki ezinokuzichukumisa.
Andikholelwa ukuba bangaphi abantu abasasebenzisa iibhanki kunye nezidaka. Andiyiboni ncam le nto.
Agasti 7, 2007 ngo-3: 15 PM
Ukuze nje uzive ungcono-hayi, akunjalo.
Ndingathi lixesha elitsha lebhanki, kodwa imeko ayinakuba ngcono. Olona khetho lwakho lokwenyani kukuthetha nomphathi webhanki yendawo.
Re ii-ATM ezingama-1400- zii-1400 phakathi kweebhanki ezimbini, hayi i-1400 entsha, kwaye isasazeka phakathi kwamanani amaninzi? Kwaye, wakhe wayibona iATM yaseHuningdon apho uhlala khona? Andizange ndibone namnye apha.
Ii-akhawunti zam zebhanki zisesibhakabhakeni, nazo. Ithengisiwe kathathu okanye kane okoko ndikhona. Khange ndibenangxaki, kodwa andizisebenzisi iiATM.
Agasti 7, 2007 ngo-10: 36 PM
Ndicinga ukuba eyona nto iphazamisayo lixabiso eliphezulu kakhulu leenkonzo zentlawulo. I-1.50 yeedola ukuya kwi-1.75 yeedola ngentengiselwano nganye? Heck, kuya kufuneka urhoxe ubuncinci be- $ 100 ngexesha lokufumana i-sucker ifikelele kwi-1%!
Apha eCanada sineebhanki ezimbalwa ezilungileyo kuphela, nangona kunjalo, ziya ziba mbalwa kwaye zimbalwa ii-ATM ezivela kwibhanki nganye nangaphezulu kwee-ATM ezizimeleyo ezivela kuyo yonke indawo. Zimbalwa ii-ATM zebhanki kunye nezinye ezizimeleyo = ngaphezulu kweenkonzo ...
Ndizifumana ndisithi "EWE!" ukubuyisa imali ezinkozo xa ubuzwa ngexesha lokuphuma evenkileni - akukho mrhumo wenkonzo yobudenge…. Kwaye yintoni heck 'ngentlawulo yenkonzo' nangayiphi na indlela? Yintlawulo ye-CONVENIENCE. Ibhanki yam indifakela inkonzo - andiqinisekanga ncam ukuba ndiyifumanela ntoni…
Iibhanki kunye neenkampani zeeselfowuni-i-bane yobukho bam.
Agasti 8, 2007 ngo-7: 18 PM
Uhlobo lokuhlekisa… Ndicinga ukuba ndisenokuba neakhawunti yeRoyal Bank yaseCanada phaya phezulu. Ukuba ibingavaliswanga kwimirhumo (mhlawumbi ibiyiyo)… ngubani owaziyo, mhlawumbi ndingusozigidi! Ngokukodwa ngoku i-loony ikhula yomelele kunebhokhwe yethu!
Amen kwiibhanki nakwiinkampani zeeselfowuni. Kubonakala ngathi ngokudala uyinkampani, kokukhona uya usiba mandundu ekunyamekeleni umthengi! Phosa iinqwelomoya apho.
Agasti 8, 2007 ngo-7: 20 PM
@Rick: Ndiyibhanki enkulu kwi-Intanethi, uRick. Ndicinga ukuba yiyo loo nto ndiye ndanesifuthufuthu kule nto. Ndide ndavula iakhawunti yam kwi-intanethi! Oko akuzange kubabize nesenti ukusingatha ishishini lam.
@Randy: Kulungile ukuva ukuba bakuphethe kakuhle, Randy! Ndiza kuvula iakhawunti kunye nabo.
Agasti 9, 2007 kwi-11: 10 AM
Ngaba amandla ebhlog? Ibhanki yam ibuyisele i $ 1.75 namhlanje.
Agasti 14, 2007 ngo-5: 27 PM
Ungaba nesibindi sokwenza uluvo onethemba lokuba yonke iSebe leNkonzo yaBaxumi lincitshisiwe ngenxa yokudibana ??? Ewe uyazi, baninzi kuthi abasebenza apho abangathanda ukukubuyisa imali yakho kodwa asinalo igunya lokwenza njalo. Kukho amakhulu abantu abaza kuphulukana nemisebenzi yabo. Amakhulu abantwana abaphila ngeendlela abazisebenzisayo ukutshintsha kakhulu. Ke musa ukwenza amagqabantshintshi ngolu hlobo kuba awunakukwazi ukufikelela kwimali encinci ye-ATM eyi-1.75 oyibuyileyo nangaliphi na ixesha kwiwebhusayithi yakho encinci ye-crybaby. Ayisiyo mpazamo yeenkonzo zabathengi ohlawulisiweyo kwaye ayilotyala labo elingazange libuyiselwe imali ekuqaleni. Into oyenzileyo ukuyibuyisa ibilungile kodwa amagqabantshintshi abukhali abhekise kubantu abangalunganga. Ndingaphantse ndikubonise ukuba xa ungathetha NAYIPHI na into yokuyeka emsebenzini bangakuxelela ukuba BAYAKUTHANDA ukukubuyisela imali yakho. Ke ngaphambi kokuba usebenze ngomlomo wakho malunga nabantu, yazi iinyani zakho ngaphambi kokuba utyumle abantu ngaphezulu kwento esele ibacimile inkampani. Uninzi lwabantu abaphulukana nemisebenzi yabo bebelapho iminyaka kwaye ayisiyo tyala labo ukuba uhlawuliswe umrhumo wokuba omnye usozigidi ogqibe kwelokuba abize ukuze abe sisityebi. Into ebekufanele ukuba uyithethile kukuba unethemba lokuba abantu abenza imigaqo baphulukana nemisebenzi. Akukho nto siyibhatalwayo kwaye sithatha ukuxhatshazwa okuninzi, izimvo zakho zizihlukunyezo oluncinci. Ungathanda njani xa umntu ekuxelela ngomso ukuba awusenamsebenzi? Okanye ukuba umntu kusapho lwakho uxelelwe ukuba enye inkampani ithatha eyabo kwaye abasayi kuphinda bafuneke? Leyo yinto enzima ukuyithatha. Ke musa ukwenza amagqabantshintshi ngokubhekisele kwinto ocinga ngayo, funda iinyani ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuba ungasinqwenela siphelelwe ngumsebenzi.
Agasti 14, 2007 ngo-8: 36 PM
Ekuphela kwendlela inkampani etshintsha ngayo ngaphakathi. Ukuba abasebenzi abakhulu bashiye abaqeshi ababi okanye iinkampani ezimbi, iya kufundisa loo nkampani isifundo.
Ukuba ubufuna ukwenza into malunga nayo kwaye ukholelwa ukuba ayifanelekanga, kuya kufuneka ushiye kunokuba uxhase umbutho onjalo.
Uyazi kwaye ndiyazi ukuba i-Sky Bank (kunye namagama angaphambili) yenza isixa esikhulu semali kubantu abahlwempuzekileyo abahlawula iifizi kunye nezohlwayo. Kufuneka ibe lulwaphulo-mthetho… kodwa ukuba nje banezitshixo zokwenza ibhidi yabo, ndiyaqikelela ukuba izinto azizukutshintsha.
Agasti 16, 2007 kwi-5: 46 AM
IKHEFU? Oko kulula ukutsho kunokuba kwenziwe xa imisebenzi iphantse yahlala apho ndihlala khona. Akukho misebenzi ngaphandle phaya engenayo umgaqo-nkqubo / inkqubo umntu wonke aya kuvumelana ngayo. Kungenxa yokuba usebenzela inkampani engagqibekanga ayikwenzi ube ngumntu ombi. Inkonzo yaBathengi ayinanto yakwenza ne- $ 1.75 yakho. Asizange siyenze loo mali. Kwaye ndiyakholelwa ukuba sonke sihlawula loo mali ibubudenge nayo. Kodwa kuya kufuneka ndikuxelele, uninzi lweebhanki luyibiza. Kwaye uninzi lweebhanki zikubiza ukuba usebenzise imali yakho kwivenkile. I-SKY ayenzi, nangona kunjalo uHuntington eyenzayo. Ke uyabona, mininzi imigaqo-nkqubo esondelayo kwaye leyo naphi na apho uya khona. Ndiqinisekile ukuba umntu osebenza eWalmart angakuxelela ngento efunxa apho .Ngoko ke ukuba ngaba babiza imali eninzi kakhulu ngento ethile ngaba loo nto yimpazamo yabantu kuba uziva ukhululwe? Kubonakala kum kufuneka ufumane izinto ezingcono onokuzenza kunye nawe kunokuba ukhathazeke malunga ne- $ 1.75 emva koko ujike kwaye unqwenele ukuba isithuba esingaphezulu kwe-100 singabinamsebenzi kwaye kumgca wokungaphangeli ohlawula irhafu !!!!
Agasti 17, 2007 kwi-2: 22 AM
Ndingathatha amathuba am kwirhafu. Ubuncinci irhafu izama ukulingana ngokwezigaba zengeniso (eneneni, bohlwaya abo bazizityebi). Imirhumo yeBhanki isohlwaya nje abakumgangatho ophakathi nangaphantsi.
Kuvakala ngathi ungumqeshwa onomdla okhathalele abathengi bakho. Ndiyathemba ukuba uza kufumana into ebhetele! Ndenza njalo.